CAJIIB: Didier Drogba Oo Magacaabay Halka Ciyaartoy Ee Saamaynta Ugu Badan Ku Soo Yeeshay Waayihiisii Ciyaareed Ee Layaabka Lahaa. - Gool24.Net
CAJIIB: Didier Drogba Oo Magacaabay Halka Ciyaartoy Ee Saamaynta Ugu Badan Ku Soo Yeeshay Waayihiisii Ciyaareed Ee Layaabka Lahaa.
Halyaygii hore ee xulka qaranka Ivory Coast iyo kooxda Chelsea ee Didier Drogba ayaa magacaabay halkii ciyaartoy ee saamaynta ugu wayn ku yeeshay waayihiisa ciyaareed. Didier Drogba ayaa dhawaan si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu gabi ahaanba ka fadhiistay ciyaarista kubbada cagta.
Didier Drogba ayaa cadeeyay in Frank Lampard uu ahaa ciyaartoyga saamaynta ugu wayn ku soo yeeshay waayihiisii ciyaareed ee cajiibka ahaa wuxuuna ka sheekeeyay sababaha badan ee uu Lampard u ahaa midkii saamaynta ugu badan ku soo yeeshay.
Didier Drogba iyo Frank Lampard ayaa muddo siddeed sanadood ah ku soo wada qaatay Stamford Bridge waxayna si buuxda u ahaayeen xidigihii ugu muhiimsanaa ee Chelsea taariikhda ugu yeelay tartanka UEFA Champions league sanadkii 2012 kii.
Isfahankii Didier Drogba iyo Frank Lampard waxaa cadayn buuxda u ah in wali ay haystaan rekoodhka laba ciyaartoy oo isku koox ahi ay gool caawin iskugu soo sameeyeen Premier league iyaga oo 36 gool dhexdooda iska soo caawiyay.
Didier Drogba oo ka hadlaya Frank Lampard ayaa yidhi: “Waxaa jira ciyaartoy aan doonayo in aan hore u soo mariyo, sababtoo ah waa ka ay inta ugu badan goolashaydu ka yimaadeen, waana Frank Lampard”.
Drogba oo sababta hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Sababtoo ah sidoo kale waxaanu maalin kasta ku sii hadhi jirnay garoonka kadib tababarka si aanu iskugu dayno in aanu tababaro samayno, sababtoo ah waxyaabihii aanu dhawr maalmood ka hor samaynay ayaa noqonayay wax aad u sahlan”.
“Sidaa daraadeed, waxaanu isku dayaynay in aanu tababaro cusub keeno isla markaana sidaas ayaanu ku hormarnay oo uu midba kaayaga kale kula tartamay in aanu goolal dhalino, in aanu gool caawin samayno isla amrkaana aniga ahaan wax badan ayaan isaga ka bartay”.ayuu Drogba hadalkiisa sii raaciyay.
Didier Drogba ayaa tilmaamay in Frank Lampard uu ahaa ciyaartoygii uu waxa ugu badan ka bartay, saamaynta ugu badan waayihiisa ciyaareed ku soo yeeshay ee ay sida gaarka ah ugu soo wada shaqayn jireen xarunta tababarka kooxdiisii hore ee Chelsea marka ay xataa ciyaartoydu baxaan.